ShweMinThar: ❆ လေ့ကျင့်ယူလို့ရနိုင်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် ❆
❆ လေ့ကျင့်ယူလို့ရနိုင်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် ❆
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဟာမွေးရာပါဖြစ်တယ်လို့လူအချို့ကဆိုကြတယ်။အချို့ကတော့သင်ယူလို့ရတဲ့စွမ်းရည်တခုသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒီအဆိုနှစ်ခုအပေါ်မှာတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတာဟာအချိန်တခုကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဒီအငြင်းအခုန်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Fortune မှဦးဆောင်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကအရွယ်စုံ၊အမျိုးအစားစုံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်စဉ်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာတွေ့ရှိချက်တွေအရအချို့လူတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဟာမွေးရာပါဖြစ်ပြီးတော့မွေးရာပါခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူအများစုအတွက်ထူးချွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ လေ့ကျင့်သင်ယူလို့ရကြောင်းသက်သေပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသက်သေပြသခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါတယ်။ “ ထူးချွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရမလဲ”ဆိုတာပါပဲ။
ဒီမေးခွန်းအပေါ်မှာHR Department အများစုအတွက်အဖြေကတော့စာသင်ခန်းအတွင်းသင်ကြားခြင်းတွေအများအပြားပါဝင်ထားတဲ့သင်ရိုးတွေကိုသင်ကြားပေးခြင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသင်ကြားပေးခြင်းကနေလည်းပြောပလောက်အောင်အရမ်းကြီးကောင်းမွန်တိုးတက်လာတာမတွေ့ရတဲ့အကြောင်း Harvard Business Review ကနေထောက်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Martin Lanikကတော့ပြသနာဖြစ်နေတဲ့အချက်က“စာသင်ခန်းတွင်းသင်ကြားခြင်းတွေဟာသင်တန်းသားဝန်ထမ်းတွေကိုဗဟုသုတ (Knowledge) တွေကိုပဲပေးလိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်တန်းသားတွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေး(Skills)တွေကိုသင်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ“သင်တန်းတွေကလူသားတွေရဲ့အမူအကျင့်(Behaviors)တွေပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိတဲ့နေ့စဉ်အလေ့အထ(Habits)တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသတိမပြုမိခြင်းကြောင့်” လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ဆိုလိုတာက Leadershipသင်ရိုးတွေကအလုပ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေအရကိုယ့်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုရေတိုပဲပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုရေရှည်ထိန်းနိုင်တဲ့လူမျိုးဟာအတော်လေးရှားပါးလှပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာကကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသင်တန်းတွေပေးနေစဉ်နဲ့သင်တန်းပေးပြီးခါစအချိန်တွေမှာတောင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုရေရှည်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးမပြုလုပ်တတ်တဲ့အလေ့အထတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြလို့ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများဟာလိုအပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသင်ရိုး (Leadership Courses) တွေပေးနေပေမဲ့မိမိတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုရရှိမလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Martin Lanikကတော့မျှော်မှန်းတဲ့တိုးတက်မှုရရှိလာဖို့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေး (Skills)တွေကိုနေ့စဉ်လုပ်ကိုင်ပြုမူနေတဲ့အလေ့အထ(Habits) တွေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးမှသာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိထိရောက်ရောက်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေး(Skills)တွေကိုဦးစားပေးပြောင်းလဲပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမရှိမဖြစ်အရည်အသွေးတွေက ၄င်းရဲ့လေ့လာချက်အရ၂၂မျိုးလောက်ရှိပြီးတော့အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် “အလုပ်ပြီးမြောက်စေသည့်အရည်အသွေးများအုပ်စု” နဲ့ “လူသားတွေအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ရသည့်အရည်အသွေးများအုပ်စု”ဆိုပြီး၎င်းကအုပ်စု၂ခုခွဲခြားထားပါတယ်။ပထမအုပ်စုမှာဆိုရင် “ဦးစားပေးအလိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊သတင်းအချက်အလက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊လုပ်ငန်းအကြံအစည်များအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း”တို့ပါဝင်ပြီးတော့ဒုတိယအုပ်စုမှာတော့ “အခြားလူများအားလွှမ်းမိုးခြင်း၊အကြံဥာဏ်များပေးခြင်း၊နည်းစနစ်များသင်ပေးခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်နွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်း” တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ဒီအရည်အသွေးတွေကိုတိုးတက်လာအောင်တနေ့ကိုနည်းနည်းစီအချိန်ပေးပြီးလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်သင်တန်းသားတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အထတွေပိုင်ဆိုင်လာမှာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ဟာထိရောက်မှုရှိတဲ့စွမ်းရည်မြင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Martin Lanikကတော့ဒီ့ထက်ပိုမိုမျှော်လင့်ထားပါသေးတယ်။တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမေးမြန်းစူးစမ်းပြီးဘယ်အရည်အသွေးတွေကသင်တန်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိစေဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အရည်အသွေးတွေကိုတော့ဖြင့်အရင်တိုးတက်အောင်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ကိုပါ သူကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Fortuneရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကလူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ဦးဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်လာဖို့ လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် တကယ့်ကိုသတင်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Martin Lanikရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအရည်အသွေး (Skills)တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးပြီးအခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်နေတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်ကလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့သူသို့မဟုတ်သူမဟာခေါင်းဆောင်မှုအလေ့အထကိုတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးစွမ်းရည်မြင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာမဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့တထစ်ချမှတ်ယူထားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စွမ်းရည်မြင့်ခေါင်းဆောင်(Effective Leaders)တွေရရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုရရှိလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးကား - “Roger Trapp” ၏ “Leadership is A Habit That Requires Practice”
ရေးသားသူ - နေသစ်
Posted by Alex Aung at 5:38 AM
Labels: Opinion, စီမံခန့်ခွဲရေး, အလုပ်​အကိုင်​
အင်ဂျင်နီယာများအတွက် PDF စာအုပ်အချို့
မြန်​မာလို​ရေးသားထား​သော အင်ဂျင်နီယာ ဆိုင်​ရာ စာအုပ်​ (31) အုပ်​ တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ (1) networking http://www.mediafire.com/file/...
#​နောက်​​ကြောကြွက်​သား (back) သိပ္ပံနည်းကျ ကစားမယ်...
ဆားငန်ဘဲဥပြည်ကြီးငါးကြော် - ခုံးထောင်း - ငါးပေါင်း...
ဝေလနှင့် အငဲတို့၏ သီချင်း Album များ
လုပ်ငန်းရှင်တွေ လျှော့တွက်လေ့ရှိတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်မျာ...
Paleo Diet ဘာလဲ …. ဘာလဲ…….?
HUAWEI Nova4(Review)
နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု( Chronic Fatigu...
တရုတ်မုန်ညင်းစိမ်းထမင်း - “လီမွန်ထမင်းနဲ့ ကြက်ဥမဆလ...
ပရိုဘိုင်အိုတစ် ( Probiotics )
Huawei Mate X : Folding Into Future (Exclusive Imp...
-Sexually active ပြန်ဖြစ်အောင် Gym ဆော့ခြင်းက ကူညီ...
မိန်းကလေးများနှင့် ကျစ်လျစ်သော အသွင်
အာလူးပူရီ - ဆူကီ - သထုံငါးပေါင်းထုပ် -ပြောင်းဖူးထေ...
❆ လေ့ကျင့်ယူလို့ရနိုင်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် ❆...
K-pop ရဲ့ တဟုန်ထိုးအောင်မြင်မှု နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေစ...
“Hand gel သုံးခြင်း အနုပညာ”
အခြေခံ ဝိပဿနာ တရားအားထုတ်နည်း
How to eat forasix pack abs - Step by Step
ကျုပ်တို့ရုံးထဲက ပြဿနာကောင် .... 👹
ငါးခြစ်ဗယာကြော်အစပ် - ကြက်ဖင်ဆီဖု ကင် - မြင်းခွာရ...
GYM မှာ Trainer မငှါးပဲ ဘယ်လိုစဆော့မလဲ ???
* မင်း တုန်း မင်း ၏ မိ ဖု ရား များ နှင့် သား တော် ...